မလေးရှားနိုင်ငံတွင် CanSino COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကြော်ငြာထားသည့် အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်းဘုတ်မျက်နှာပြင်နံဘေး ဖြတ်သန်းသွားလာသူတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကွာလာလန်ပူ၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံ CanSino Biologics ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော တစ်ကြိမ်တည်းသာထိုးနှံရသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန် ၁၅ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ စီလန်ဂါပြည်နယ် ကလန့်မြို့တွင် COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးမှုခံယူရန် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ကာ စောင့်ဆိုင်းနေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
CanSino မှ ထုတ်လုပ်သော Convidecia Recombinant နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး (Adenovirus Type5Vector) အား ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များက ခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Noor Hisham Abdullah က ပြောခဲ့သည်။
CanSino သည် ကုန်ချောများဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံအား ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကာ ဒေသတွင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဒေသတွင်း မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း CanSino Biologics ကုမ္ပဏီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Xin Chunlin က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ Johnson & Johnson ဆေးဝါးကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ဇွန် ၁၅ ရက်က ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ WHO ဦးဆောင်သော COVAX အစီအစဉ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ပါဝင်မှုမှတစ်ဆင့် ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း Noor Hisham က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများအတွက် အသုံးပြုရန် Pfizer-BioNTech မှ ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကာကွယ်ဆေးအား အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများအတွက် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ယခင်ကခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
CanSino ကာကွယ်ဆေးအတွက် ခွင့်ပြုချက်မရရှိမီ တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကာကွယ်ဆေးကုန်ချောများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac မှ ထုတ်လုပ်သော ဒေသတွင်း အပြီးအစီးပြုလုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များ နှစ်မျိုးလုံးကို မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့သော ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအား အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဇွန် ၁၄ ရက် တစ်ရက်တည်းတွင် ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၁၉၇,၉၆၃ လုံး ထိုးနှံခြင်းဖြင့် စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေး ၄.၆ သန်းခန့် ထိုးနှံခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ၁.၄ သန်းမှာ နှစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Malaysia conditionally approves CanSino COVID-19 vaccine for use
Source: Xinhua| 2021-06-16 09:21:22|Editor: huaxia
KUALA LUMPUR, June 16 (Xinhua) — Malaysia has conditionally approved emergency use of the single-dose COVID-19 vaccine developed by Chinese company CanSino Biologics, the Health Ministry said Tuesday.
Health Ministry Director-General Noor Hisham Abdullah said the approval was given by the regulators to the Convidecia Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type5Vector) developed by the CanSino.
CanSino Biologics Vice President Xin Chunlin told Xinhua that CanSino will supply Malaysia with finished products and is also working with local partners for local manufacturing.
The COVID-19 vaccine developed by U.S. Pharmaceutical company Johnson & Johnson has also been granted emergency use on Tuesday, said Noor Hisham, adding that the country is expected to obtain the vaccines through Malaysia’s participation in the WHO-led COVAX program.
He added that Malaysia has also cleared the COVID-19 vaccine developed by Pfizer-BioNTech for use by those aged 12 and above. The vaccine had previously been approved for use in Malaysia in January this year for those aged 18 and above.
Before the approval for the CanSino vaccine, both the finished vaccines imported from China and the locally fill-and-finish products developed by China’s Sinovac have been used in Malaysia’s national immunization program after receiving approval from the country’s regulators.
Malaysia has been ramping up its vaccination drive which started in February, withasingle-day record high of 197,963 doses administered on Monday. Some 4.6 million doses have been administered, with 1.4 million have received two doses.■
Photo 1- A delivery man passes by an electronic screen with ads against COVID-19 in Kuala Lumpur, Malaysia, June 1, 2021. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
2- People wearing face masks wait for COVID-19 swab tests in Klang, Selangor, Malaysia, May 30, 2021. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)